Môrmônisma - Wikipedia
Ny môrmônisma dia ny foto-pampianaran' ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany. Izany foto-pampianarana izany dia ahitana ny Teti-pamonjena izay misy vondron-dalàna voalamina, ordonansa mandrakizay, ireo lalàna ireo no rafitra entin' Andriamanitra mitantana ny fanjakany. Ny Olomasin' ny Andro Farany dia mino ny fisian'ny Teti-pamonjena izay ahafahan' ny olona mendrika hiverina eo anatrehan' Andriamanitra. Atao hoe "Filazantsaran' i Jesoa Kristy" ny teôlôjian'ny Fiangonan' i Jesoa Kristy ho an' ny Olomasin' ny Andro Farany. Fampianarana avy amin' ny fanambaràn' i Jesoa Kristy izay miendrika firafetan-dalàna sy didy mandrakizay izany ka ny olona izay manaraka an-tsakany sy an-davany an' izany dia mahazo antoka fa hiditra eo amin' ny fanatrehan' Andriamanitra. Ireo lalàna sy didy ireo no lamim-pitondrana ao amin' ny fanjakan' Andriamanitra. Ho voavonjy avokoa ao amin' ny Fanjakam-boninahitra ny olona rehetra fa tsy voatery ho ao amin' ny Fanjakan' ny Lanitra.
Ny Bokin' i Mômôna, amin' ny teny anglisy
1.4 Fiezahan' ny Olomasina ho amin' ny tonga lafatra hatrany
3.1 Ilay Voalohan-teraka tao amin' ireo zanaka fanahy
3.2 Zanany lahitokana kosa ao amin' ny nofo
Ny fiainana miaraka amin' Andriamanitra talohan' ny feteza-matyModifier
Mandao ny fanatrehan' AndriamanitraModifier
Mifandray amin' AndriamanitraModifier
Fiezahan' ny Olomasina ho amin' ny tonga lafatra hatranyModifier
Ny fianakaviana mandrakizayModifier
Ny asa ao amin' ny Tempoly sy ny tantaran' ny fianakavianaModifier
Ny fiainanana aorian' ny fahafatesanaModifier
Misy ny fanomezana dingam-pisondrotam-boninahitra: amin'ny fitsarana ny olona tsirairay dia omena ny iray amin'ireo dingam-boninahitra telo ireo, arakaraka ny safidiny tao amin'ny fotoana nahamety maty azy (eto an-tany) sy any an-koatra. Ireto ireo dingana na ambaratongam-boninahitra ireo: telestialy sy terestrialy ary selestialy. Teny am-panoharana ireo.
Ny amin' AndriamanitraModifier
I Jesoa KristyModifier
Ilay Voalohan-teraka tao amin' ireo zanaka fanahyModifier
Zanany lahitokana kosa ao amin' ny nofoModifier
Ny fiaviany indray dia ilaina amin' ny FamonjenaModifier
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Môrmônisma&oldid=1013515"
Dernière modification le 9 Aogositra 2021, à 11:41
Voaova farany tamin'ny 9 Aogositra 2021 amin'ny 11:41 ity pejy ity.